Rajesh Koirala » Blog Archive » यसरी पनि आउँछ, डिस्टिङ्सन
पछिल्लो एसएलसी परीक्षाको घटना हो । आफ्ना छोरालाई बिहान साढे छ बजे नै स्कूल पुग्नुपर्ने भनेपछि अर्का एक अभिभावकको टाउको रनक्क तात्यो । उनले स्कूल-प्रशासनलाई भने, ‘मेरो घर परीक्षा-केन्द्र परेको स्कूलकै साँधमा छ । त्यति बिहान किन पठाउनु स्कूल ? म पौने आठतिर परीक्षा-केन्द्रमा पुर्‍याउँछु ।’ स्कूल-प्रशासनले उत्तर दियो, ‘यो अनिवार्य हो । ल्याउनै पर्छ ।’ अभिभावकका मनमा खुल्दुली भयो, ‘किन पो यति बिहानै स्कूल बोलाइयो ?’ उनले यहि प्रश्नका उत्तर खोज्न थाले । यसमा पनि अर्को अनौठा निष्कर्ष निस्कियो ।
घटनाहरू धेरै नै छन् । एसएलसीको रिजल्ट समग्रमा बिग्रिएको छ । उत्तीर्ण प्रतिशत कम हुनुका कारण धेरै छन् । सरकारी स्कूलहरुमा सामान्यतः कोर्स नै पूरा हुन सक्दैन । सबभन्दा ठूलो समस्या भनेको स्कूलमा राजनीति हो । राजनीतिका आड-भरोसहरू सरकारी स्कूलका शिक्षकशिक्षिकालाई बनाइयो । बन्दले स्कूलहरू प्रभावित भएकै छन् । बेलामा किताब पुग्दैनन् । सरकारीका आफ्नै यस्ता धेरै समस्या पनि छन् ।
उता कूल उत्तीर्णमध्ये करिब २० प्रतिशत हिस्सा नीजि स्कूलहरूबाट हुन्छन् । नीजि स्कूलका ९० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी उत्तीर्ण हुन्छन्, त्यो पनि उल्लेख्य डिस्टिङ्सनमा । आखिर यी सबै नीजि स्कूल यति योग्य छन् ।
उत्तर सजिलो छैन । समग्रमा भन्नुपर्दा केही योग्य छन् । केही छैनन् । योग्य प्रशंसालायक छन् तर अयोग्य कुन अर्थमा अयोग्य छन् यो भने खोज्नै पर्ने विषय बनेको छ । अयोग्यता अर्को पाटो पनि छ, यो कुन अर्थमा भने रिजल्ट राम्रो ल्याउनका लागि उनीहरुले गर्ने अनियमितता । यहाँ तीनै केही अनियमितताका कुरा ।
यस्ता धेरै स्कूलहरुले कक्षा १० मा पुगेका आफ्ना सबै विद्यार्थीलाई होस्टलमा राख्न प्रस्ताव ल्याउँछन् । वर्षभरको खर्च भनेर, ‘यति खर्चनुहोस् । अवश्य डिस्टिङ्सन’ भन्छन् । यसो हेर्दा कुरा जायज छ । कक्षा ९ सम्म यसै-उसै पढाइएका विद्यार्थीलाई कक्षा १० मा पुगेपछि ‘आइसियु’ मा राख्नुको अर्को गम्भीर कारण छ ।
होस्टलमा बसे वा एसएलसीका हुने दिन बिहानै स्कूल ल्याउँदा हुने एउटा बदमाशी यस्तो छ । आफ्नो स्कूलमा पनि सेन्टर बन्यो भने धेरै सजिलो भएको पाइएको छ । आफूले भनेअनुसारको केन्द्राध्यक्ष भए, पुलिसका आँखा छलेर वा पुलिससँगै मिलेर परीक्षाभन्दा केही घण्टाअघि प्रश्न-पत्र खोलेर सम्बन्धित शिक्षकले पढाउनेसमेत गरेका छन् । यसरी पढाइसकेपछि विद्यार्थीलाई स्कूल-बसमा हालेर परीक्षाकेन्द्र पुर्‍याइन्छ । माथि उल्लेखित घटना २ को जवाफ यही हो ।
केही स्कूलहरूले सिंगै परीक्षाकेन्द्र किन्छन् । केन्द्राध्यक्ष को भयो ? आफ्ना विद्यार्थी परेको केन्द्रमा को को निरिक्षक छन् ? केन्द्राध्यक्षलाई भेट्न के गर्ने ? घर कहाँ हो ? कस्ता मिजासका हुनुहुन्छ ? भनेजस्ता केन्द्राध्यक्ष भए के खर्च लाग्ला ? उहाँले कस-कसलाई निरिक्षक राख्दै हुनुहुन्छ ? सबैका लागि एकमुष्ठ की बेग्लाबेग्लै कति खर्च गर्दा पुग्ला ? केन्द्राध्यक्षको घर पो खुइलिएको छ कि ? रंग लगाएर हुन्छ की पर्खाल बनाइदिएर हुन्छ ? मोटरसाइकल नै बक्सिसमा दिलाउँदा काम बन्छ की ? यो समय काठमाडौंमा देखिने तीजजस्तो हुन्छ । एकदिन एउटा थलामा खायो, अर्का दिन अर्कामा- त्यो पनि प्रशस्त जाँड-पानी । यस्ताबेला प्रिन्सिपल वा संस्थापकका मनमा यस्ता अनेकन प्रश्न छन् । जवाफ पनि छन् किनभने भनेजति पैसा छ ।
नचिनेको अवस्थामा अनेकन समस्या आइपर्छन् । सम्पर्क नै गार्‍हो हुन्छ । पहिलो लक्ष्य केन्द्राध्यक्ष नै हुन्छन् । उहाँसँग सब कुरा मिलेपछि निरिक्षकको पालो । निरिक्षकमा अभिभावक राखेर पनि सजिलो पार्ने गरेका घटनाहरु पनि फेला नपरेका होइनन् । सबै तहमा काम मिलेपछि केन्द्राध्यक्ष र निरिक्षकले के गर्नु पर्‍यो त ?
सिट प्लानिङमा अलि ख्याल गरिदिनुपर्‍यो । हामीले रजिष्ट्रेसन फर्म भर्दा नै जान्ने र नजान्ने मिसाएर राखेका छौं । त्यसैले त्यो क्रम बिगारिदिनुभएन । स्कूलले मिलाउने गरेको क्रमलाई तोड्दै जिल्ला शिक्षा कार्यालयल भन्यो, ‘जे पायो त्यहि नगर्नुहोस् । अल्फाबेटिकल मिलाउनुहोस ।’ यो निर्देशनपछि अल्फाबेटिकल क्रममा मिलाइयो पनि । तर पछि अर्डर चलाखीपूर्ण ढंगले बिगारियो, जस्तो : अमरपछि अनिल आउनु पर्नेमा आरजु नजान्ने भएकाले अर्डर बिगारेर दुवैको बीचमा आरजुलाई राखियो ।
उनीहरूले खर्चेर गर्ने अरु आग्रह यस्ता पनि छन् । परीक्षा अलि खुकुलो गरिदिनुपर्‍यो । केन्द्राध्यक्षले सबै निरिक्षकलाई यहि निर्देशन दिनुपर्‍यो । सबै विषयको परीक्षामा एउटा कोठामा त्यहि निरिक्षक राखिदिनुहोला । त्यसो गर्दा मेरा विद्यार्थी चिन्न सजिलो हुन्छ । कहिलेकाही थप कपि अघिल्लो दिन दिए, भोलीका लागि केही लेखेर ल्याउन पाउँथे । निरिक्षकले विद्यार्थीले अनियमित कार्य गरेको होइन, बाहिरबाट कोही आए-नआएको खबर दिने काम गरिदिएपुग्छ ।
आफ्ना विद्यार्थी परका केन्द्रका केन्द्राध्यक्ष नै आफ्नो पोल्टामा आएपछि काम सजिलो हुन्छ । स्कूलका सञ्चालक/निर्देशक/मालिक घुम्दै पुग्छन् । आफ्ना विद्यार्थीलाई, ‘मलाई नचिनेजस्तो गर्नु’ भनेर सिकाएको हुन्छ । आफू गयो र गाली गरेजस्तो गरी भन्यो, ‘कहाँ बसेका, यता बस ।’ यसरी आफ्नो नजान्ने विद्यार्थीलाई जान्नेसँग राखेका समेत पाइएको छ ।
यसरी राम्रा रिजल्टका लागि नीजि स्कूलहरुमा हुन अनियमिततामाथि छानबिन कसले गर्ने ? विद्यार्थीको आफ्नोपन मार्ने विद्यालयहरुलाई तपाई पगरी गुताउन छाड्नुहुन्छ वा हुन्न ?
(२०६९ साउन २ को ‘नागरिक‘ दैनिकमा प्रकाशित)
महेश सागर खनाल says... on 20-07-2012
७ वर्ष अघि अनामनगर को चियापसलमा सुनेको गफ अहिले नी याद छ. निजि स्कुलका बिद्यार्थी बोइलर कुखुरा जस्ता हुन् दाना हालेर आकर्सक बनाइएका तर टेस्ट नभएका
Chetanath says... on 13-06-2013
Ye Dai Kasari thaha pauchhan patrakarle sancha kura haru?
Rajesh says... on 13-06-2013
पत्रकारको काम नै यस्ता विषयमा खोज्नु र जनतालाई सूचना दिनु हो । उसले लेख्छ भनेपछि पत्रकारलाई यस्ता विषयमा जानकारी दिन पनि उसका पाठकहरू सधैं इच्छुक हुन्छन् ।
cvahari khadka says... on 13-06-2013
Ho tasaiko parinam ta +2 ma fail ,berojgar , khi garna nasaknu ho ni